ညီနေမင်း: Firefox browser ကို နှစ်ဆပိုမြန်အောင် ဘယ်လို speed up လုပ်မလဲ
Firefox browser ကို နှစ်ဆပိုမြန်အောင် ဘယ်လို speed up လုပ်မလဲ
မျိုးတင့် : အစ်ကိုရယ် firefox ကို speed မြှင့်လို့ရတယ်လို့ ကြားဖူးတယ် . ဘယ်လိုမြှင့်တာလဲ ဖြေပေးပါဦး . အားကိုးပါတယ်အစ်ကိုရယ် . ကျွန်တော်လိုက်ရှာတာ မတွေ့လို့ပါ .
Firefox ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ မသုံးမဖြစ် အသုံးပြုရမယ့် browser တစ်ခုပါပဲ . သူ့ကို ဘာ့ကြောင့်ကြိုက်လဲဆိုရင် add-ons တွေ ပါနေလို့ပါ . Firefox ကို နှစ်ဆ ပိုမြန်အောင် လုပ်ဆောင်ပုံ လုပ်ဆောင်နည်းကို ကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်ပါတယ် . ပုံနဲ့တော့ မပြတော့ပါဘူး . ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ပုံပြရင် အများကြီးဆိုတော့ လုပ်နေရတာကြာလို့ပါ . လွယ်ပါတယ် . စမ်းကြည့်ပါဦး . ဒီနည်းလမ်းလေးကို ညီလေး ဇော်ရဲပိုင်ရေးထားတာတွေ့လို့ ပြန်ပြီး မျှလိုက်ပါတယ် .
(၁) Address Bar ထဲမှာ about:config ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Enter ခေါက်ပါ။
(၂) Filter Search Bar ထဲမှာ Network.http.pipelining ကိုရိုက်ထည့်ပြီးရှာပါ။ Value Field မှာ Double Click ခေါက်ပြီး True အဖြစ်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပါ။
(၃) Filter Search Bar ကိုပြန်သွားပါ။ Network.http.pipelining.maxrequests ကို ထပ်ရှာပါ။ ဒီ Option ပေါ်မှာ Double Click ပေးပါ။ တန်ဖိုးကို (8) ပြောင်းပါ။
(၄)network.http.proxy.pipelining အားထပ်ရှာပါ။ Double Click ပေးပါ။ တန်ဖိုးကို True ပြောင်းပါ။
(၅)filter Search Bar ထဲမှာ Network.dns.disableipv6 ကိုရှာဖွေပြီး Double Click ပေးခြင်းဖြင့် Value ကို True အဖြစ်ပြောင်းပါ။
(၆)content Interrupt Parsing
ဒီနည်းလမ်းကတော့ မီးမြေခွေးကို အသုံးပြုနေရင်းနဲ့ Application တစ်ခုခုကြောင့် Page Loading ရုတ်တစ်ရက်ရပ်တန့် ခြင်းကို တုန့်ပြန်မှုမှ ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
- about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမဆို Right Click (apple User များ - Ctrl+click) ပေးပါ။ New မှတစ်ဆင့် Boolean ကို ရွေးပါ။ New Boolean Value Pop-up Window ထဲမှာ Content.interrupt.parsing ကိုတည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ New Boolean အတွက် Value ကို True ကိုရွေးပါ။ Ok ပေးပါ။
(၇) Page Loading လုပ်နေစဉ်အတွင်း ကြန့်ကြာမှုဖြစ်စေသည့် Rendering လုပ်ခြင်းအား အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ တုံ့ပြန်မှု မဖြစ်စေရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
- about:config Window အတွင်းမှာပဲ Right Click ထပ်ပေးပါ။ Pop-up Menu မှတဆင့် New ကိုရွေးပါ ၊ ထိုမှတဆင့် Integer ကိုရွေးပါ။
- New Integer Pop Up Menu အတွင်း Content.max.tokenizing.time ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ Value ကို 2250000 ထည့်ပါ။ Ok လုပ်ပါ။
(၈)content Notify Interval
ဒါကတော့ စာမျက်နှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အကူး စောင့်ဆိုင်းချိန် အနည်းဆုံးဖြစ်စေဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။
- about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။
- Content.notify.interval ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။value ကို 750000 <ပေးပါ။ Ok လုပ်ပါ။
(၉)content Notify Ontimer
မိမိအသုံးပြုပြီးသား စာမျက်နှာတစ်ခုကို ပြန်ခေါ်ရာမှာ စောင့်ဆိုင်းချိန်နည်းပြီး ပိုမိုသွက်လက်စွာအလုပ်လုပ်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
- about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Boolean ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.notify.ontimer ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ Value ကို True ရွေးပြီး Ok ပေးပါ။
Timer-based Reflows တွေကို အမြင့်ဆုံး နံပါတ်အထိ ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ဒီနည်းလမ်းကို သုံးပါတယ်။
-about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.notify.backoffcount ကိုရိုက်ပြီး Ok ပေးပါ။ Value ကို5ပေးပြီး Ok လုပ်ပါ။
(၁၁)content Switch Threshold
ဒါကတော့ ၀ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကနေ ဒေတာတွေကို အလွဲအပြောင်းလုပ်ရန်အတွက် ကြာမြင့်ချိန်ကို အနည်းဆုံးဖြစ် အောင်လျော့ချထားတာဖြစ်ပါတယ်။
- about:configwindow ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.switch.threshold ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok လုပ်ပါ။value ကို 750000 ထည့်ပြီး Ok လုပ်ပါ။
(၁၂)nglayout Initialpaint Delay
မီးမြေခွေးနဲ့ ၀ဘ်စာမျက်နှာတွေဖွင့်တိုင်းမှာ မိမိလိုအပ်တဲ့ စာမျက်နှာမရောက်မှီ အမှန်တစ်ကယ် မလိုအပ်တဲ့ ဒေတာတွေ အများအပြား ကိုပါ မီးမြေခွေးက ဒေါင်းလုဒ်ချ လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် စောင့်ဆိုင်း ချိန် အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ထား နိုင်ပါတယ်။
- about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Nglayout.initialpaint.delay ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Ok လုပ်ပါ။ Value ကို0ထားပါ။ Ok ပေးပါ။
ကဲစမ်းကြည့်လိုက်ပါ . တစ်ကယ့်ကို နှစ်ဆ မြန်သွားပါလိမ့်မယ် ..
Posted by ညီနေမင်း at 4:57 AM
Labels: Answers, Firefox
Could you post about some hiding ip adress.And how to use it.
၀ိုင် October 1, 2009 at 7:39 AM
ကိုညီနေမင်း ကျွန်တော်စက်မှာ စမ်းကြည့်တော့ ဟမ်းသွားရော အစ်ကို :P ဟိ ဘာလို့လဲတော့ မသိဘူး
ရင်ဘတ်ထဲမှဆွဲထုတ်ထားသောအရာများ October 3, 2009 at 6:15 AM
Myat Minn October 6, 2009 at 11:06 PM
ကိုညီနေမင်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တော်တော်ကိုသုံးလို့ကောင်းသွားတယ် သိသိသာသာကိုမြန်သွားပါတယ် ခုလိုသင်ပေးတဲ့အတွက်ကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်